ညီရဲသစ်: ကာရံမဲ့ အလွမ်းည
Posted by ညီရဲသစ် at 14:59
Cameron 19 October 2011 at 16:02
စံပယ်ချို 19 October 2011 at 16:09
ဒါပေမယ့် ဒီလိုဇာတ်လမ်းလေးတွေကို မခံစားနိုင်လို့ပါ။
Anonymous 19 October 2011 at 16:58
ပုံ/ တနင်္ဂနွေနေ့က ဘီယာအတူသောက်ခဲ့သူ
mstint 19 October 2011 at 17:37
ရေစက်ပါသလောက်ပေါ့ မောင်ညီရဲရေ။ အရာရာဟာ ဖန်တီးယူလို့မရဘူးဆိုတဲ့ သင်ခန်းစာလေးပဲ။
မြသွေးနီ 19 October 2011 at 17:50
ဖတ်ပြီး တကယ်ချစ်ခဲ့တဲ့ ကောင်လေးအတွက် စိတ်မကောင်းဘူး။ မိန်းကလေးကိုယ်တိုင်က သတ္တိမရှိရင် မစွန့်စားသင့်ဘူး။ အချိန်မလွန်ခင် နောက်ဆုတ်သင့်တယ်။ အခုတော့ နှစ်ဦးလုံး ကြေကွဲရတာပဲ အဖတ်တင်တယ်။ ရေးထားတာကောင်းတော့ ဖတ်ပြီး စိတ်မကောင်းဘူး။
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) 19 October 2011 at 21:26
ကျော့က တကယ်တော့ မှားတယ်လို့ ပြောရမယ်
ကိုယ့်မှာလက်ထပ်မဲ့သူရှိနေရက်နဲ့ ကောင်လေးရဲ့အချစ်ကို လက်မခံသင့်ဘူး။ ၂ယောက်လုံးအတွက် ဝေဒနာတွေဖြစ်စေတယ်။
ခုလိုလုပ်သွားတာက စလုံးမှာရှိနေတုန်း ခနတာ ရည်းစားကောက်ထားသွားပြီး အချိန်တန်တော့ လက်ထပ်ရမဲ့သူဆီ ပြန်သွားတာမျိုးဖြစ်နေတယ်။
ကိုယ်မနိုင်တဲ့ဇာတ်ကို မကခဲ့သင့်ဘူးပေါ့။ ကျန်ရစ်သူမှာ ဝေဒနာတွေနဲ့ဖြစ်သွားခဲ့ပြီ။ သနားစရာ
မိုးမြင့်တိမ် 19 October 2011 at 22:13
ဇာတ်ကွက်ကလေးကို ၀ထ္တုတို ကဏ္ဍထဲဝင်အောင် ချပြထားတာလေး။ ဇာတ်လမ်းအစပိုင်းကို မြုပ်ကွက်ထားထားပြီး
" မိစ္ဆာတွေထုံကူးတဲ့ အသိုက်အမြုံ
နင်ချန်ရစ်လေမှ ကြုံတယ် "
ပဥာက် 19 October 2011 at 23:51
Candy 20 October 2011 at 00:24
အစ်ကို... အဲ့ဒါအစ်ကိုဇာတ်လမ်းတော့ မဖြစ်ပါစေနဲ့နော်.. အဲဒါမျိုးဆို မခံနိုင်ဘူး.. ၀မ်းနည်းတယ်.. အရမ်း.. :( .. ဘာလို့များ ကျော့က အဲ့လိုလုပ်ရလည်း မသိဘူးနော်.. မဖြစ်နိုင်ရင်လည်း မျော်လင့်ချက်တွေ မပေးခဲ့သင့်ဘူး.. ခုတော့... :(
အရမ်းဝမ်းနည်းတယ်.. ဗြဲ... :(
အင်ကြင်းသန့် 20 October 2011 at 00:34
ကောင်လေး ရင်ထဲမှာ ဘယ်လောက်ထိ ထိခိုက်နာကျင်နေမလဲဆိုတာ ကိုယ်ချင်းစာ နားလည်မိတယ်....
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! 20 October 2011 at 01:59
ဘဝဆိုတာ လိုသလိုမဖြစ်သလို အချစ်ဆိုတာကလည်း ထိန်းချုပ်ဖို့ ခက်ခဲတယ်လေ.... အဲလိုအဖြစ်မျိုးတွေနဲ့...ကင်းဝေပါစေလို့ ဆန္ဒပြုရင်း..
blackroze 20 October 2011 at 02:56
ချစ်သူတွေကွဲသွားတဲ့ဝတ္ထုကိုမဖတ်ချင်ဘူး Black ရေ
မဒမ်ကိုး 20 October 2011 at 13:47
အင်းး အင်းးဘာပြောရမလဲ .
စလုံးမှာဒီပုံပြင်တွေက ဆင်တူယိုးမှား ဖြစ်ပျက်နေကြတာပဲ့
သတ္တိရှိရင် လက်တွဲလိုက်စမ်းပါ ပုံပြင်တွေပြောပြမယ့်အစား
မိဘစကားနားထောင်လို့ မိဘပေးစားတဲ့သူနဲ့ယူရပါမယ်ဆိုတာ ပုံပြင်ထဲမှာနေရစ်ခဲ့ပါပြီကွယ်း)
အလွမ်းမြို့ 20 October 2011 at 18:15
လာရောက်အားပေးသွားတယ်။ ကော်မန့်တွေ အားလုံးခံစားချက် တူပေမဲ့...မဒမ်ကိုးလေးကတော့ အဟီး ကိုရင့်ကိုဇွတ် အတင်းယူခဲ့ပြီး သက်သေပြခဲ့တော့ ပြောအားကောင်းနေတယ်။အဟီး.. မဒိုးကန် လို သတ္တိရှိကြဘို့ တိုက်တွန်းတယ်။ စာရေးသားလေးထဲ မျောပါသွားတယ်။
အလွမ်းမြို့ကတော့ (အဆိုတော် လေးလေးဝါး ဆိုသလို ဆိုလိုက်မယ်...ဇွတ်ချစ်ကြကွယ် အချစ်စိတ်က သိပ်ပြင်းတယ်။) ပျော်ရွှင်ပါစေ
မေသိမ့်သိမ့် ကျော် 21 October 2011 at 06:11
ချစ်ပြီးမှလမ်းခွဲရတာ ၊ ချန်ထားခံခဲ့ရတာ တကယ်ကို နာကျင်နေမှာပဲ။ စိတ်မကောင်းပါဘူး။ အချိန်က ကုစားသွားမှာပါ။
ကိုဇော် 21 October 2011 at 07:28
ဟာဗျာ . . .
အခု လတ်တလောမှာ လောလောလတ်လတ် တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဖတ်ဖြစ်ရတယ်လို့။ ကျနော်လည်း ဒီလို အဖြစ်မျိုးနဲ့များ ကြုံမိနေမလား မသိဘူး။ ကံပေါ့လေ။
လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် 21 October 2011 at 14:51
ညီလင်းသစ် 22 October 2011 at 07:01
မိဘတွေရဲ့ ကျေးဇူးခံ၊ ကျေးဇူးစား အဖြစ်က သားသမီးတွေအပေါ် လာပြီး တင်နေတာ..၊ သားသမီးတွေကလည်း အဲဒီ 'ဝန်' ကို မထမ်းချင်ဘဲနဲ့ ဇွတ်မှိတ် လက်ထပ်လိုက်ရတာ..၊ အဲဒီအဖြစ်မျိုးတွေ ကျနော်တို့ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ လုံးဝ ကင်းရှင်းသွားဖို့ပဲ ဆုတောင်းရတော့မယ် ထင်ပါရဲ့ဗျာ၊ တကယ်ဆို မိဘနဲ့ သားသမီးကြားမှာက နားလည်ပွင့်လင်းမှုရယ်၊ လူငယ် နှစ်ယောက်ကြားမှာတော့ အချစ်စစ်ရယ်.. ဒါပဲလိုတာ မဟုတ်လား၊ ညက်ညောတဲ့ အရေးအသားမို့ ဖတ်လို့ကောင်းပါတယ်...။
...အလင်းစက်များ 23 October 2011 at 07:14